भयावह बन्दै कोरोना भाइरसको महामारी, यसरी बढ्दैछ मृत्युदर (तथ्यसहित) – Himshikharnews.com
भयावह बन्दै कोरोना भाइरसको महामारी, यसरी बढ्दैछ मृत्युदर (तथ्यसहित)
१७ श्रावण २०७७, शनिबार १४:०६
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमित संख्या घटेको तथ्यांक देखिएपनि यो घातक बन्दै गएको छ । संक्रमित संख्या २० हजार नजिक पुगेको छ । जसमध्ये ५६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
कोरोना संक्रमितहरु विगतमा उपचरापछि सामान्य अवस्थामा फर्किएर गएकोमा पछिल्लो समय जटिल विरामी परेको खबरहरु आएका छन् । वीरगञ्ज र विराटनगर कोरोना हटस्पट बनेका छन् । त्यहाँका अस्पतालका आइसीयु र भेन्टिलेटर भरिन थालेका छन् । वीरगञ्जमा अस्पताल नै भरिन थालेको छ । संक्रमितलाई आयसियु र भेन्टिलेटरमा लानुपरेको अवस्था आएको छ ।
हिजो र अस्ति एकैपटक वीरगञ्जका चारजना संक्रमितको मृत्यु पुष्टि भयो । विगत नौं दिनमा नौं जना मृतक वीरगञ्जकै छन् । यो आफैमा गम्भीर विषय हो । कोरोना समुदायमा फैलन थालेको र मानिसको मृत्यु दर बढ्दै गएको देखिन्छ ।
हालसम्म मृतकको तथ्यांक केलाउँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट पहिलो मृत्यु ३ जेठमा भएको थियो । त्यसयता मृतकको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । सबैभन्दा बढी दीर्घरोगीको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेहरु अधिकांश वृद्ध छन् ।
जेठ महिनामा १९ जनाको मृत्यु भएकोमा असारमा २० जना पुगेको थियो । साउनको १६ गतेसम्म १७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यसरी प्रत्येक महिना कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको देखिन्छ ।
देशमा अहिलेसम्म ४५ पुरुष, १० महिला र १ शिशुको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । जसमध्ये तीनजना विदेशी छन् । मृतक विदेशीमध्ये एकजना चिनियाँ र दुईजना भारतीय हुन् ।
मृतक कुन महिनामा कति
५५. पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज को छपकैयामा बस्दै आएका ६५ वर्षका पुरुषको १५ साउनको विहान निधन भएको । उनी भारतीय नागरिक हुन् । मृत्युपश्चात् दिउँसा स्वाव परीक्षण हुँदा कोरोना पुष्टि भएको । १६ साउनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको
५६. पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज ११ घर भई थलिखेल ललितपुर बस्ने वर्ष ६५ की महिलाको पाटन अस्पतालमा १६ साउनमा मृत्यु भएको । मधुमेह तथा प्रेसरको विरामी ६ साउनमा पाटन अस्पतालमा भर्ना भएकी । ज्वरो खोकीलगायत स्वास्थ्यमा समस्या भई उपचारको लागि स्टार अस्पतालमा भर्ना भएकी उनको ६ साउनमा कोरोना पुष्टि भएपछि पाटन अस्पतालमा रेफर गरिएको । १६ साउनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको/reportersnepal.com bata